OTU ESI MEPEE ỌDỤ ỤGBỌ MMIRI NA LINUX - LINUX - 2019
Ọdụ mmiri na-emeghe na Linux
Nhọrọ nke mmemme maka nbudata faịlụ torrent, ọ ga-adị, ọ bụ ihe dị mfe. Otú ọ dị, maka ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike, ọ dị ezigbo mkpa ka ndị ahịa dị mkpa. Na ya, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ibudata faịlụ dị iche iche, kama ọ dịkwa mfe ịkwasa ọdịnaya.
uTorrent (gụọ na ịkpọ "mutorrent") bụ uru na-enweghị uru na-eji usoro BitTorrent. N'oge a, a na-ewere ya dị ka onye isi na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa ahịa. A na-ewere usoro a dịka ntọala maka ịmepụta ndị ahịa ọzọ. Gịnị mere o ji dị mma?
Akụkụ a bụ ọkacha mmasị maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ejiri arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ na proxies, encryption protocol na ụzọ ndị ọzọ na-edebe stealth na Internet. Ọ dị mkpa iji amaonye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata ihe ka ndị ọzọ wee ghara ịchịkwa usoro a. Ya mere, omume gị agaghị enwe ike ịkọ ọ bụghị nanị na-emepụta ihe nlekota oru nlekota oru, ma ọbụna onye na-ahụ maka Ịntanetị agaghị enwe ike ịmara na ị na-eji uTorrent.
Ntube ihuenyo na-egosi n'ụzọ doro anya na ọ dị mfe ịmebanye aha: naanị banye n'ime ihe nke iyi ahụ tupu nbudata, hichapụ ndị nyocha niile ma lelee igbe dị na mpaghara "Ntọala ndị ọzọ".
Ọ bụghị ụdị pụrụ iche, kama ọ bara ezigbo uru. Na mgbakwunye, na onye ọ bụla egwu ọkpụkpọ egwu dị iche, nke pụtara na àgwà ya abụghị otu. A na-ewu ọkpụkpọ HD kacha mma n'ime muTorrent, nke na-enye gị ohere ile vidio ma gee ntị na egwu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na faịlụ ahụ ebuteghi. Site n'uzo, ma ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ adịghị amasị ya, mgbe ahụ n'usoro ihe omume ị nwere ike ịhọrọ iji ụdị egwuregwu ahụ, nke ị na-ejikarị eme ihe.
Maka ndị ọrụ dị mkpa iji jikwaa ihe oriri ha n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla, enwere ọrụ Ime. A ga-ejikwa ihe ngwa ngwa gị kesaa na nbudata gị, nke ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na i nwere Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry ngwaọrụ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmepụta akaụntụ gị n'ọdụ ụgbọ oloko ma jikwaa onye ahịa ahụ na ihe nchọgharị ọ bụla.
Mepụta iyi ọhụrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta nkesa, enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị mfe iji muTorrent. O zuru ezu ịhọrọ na nchịkwa menu menu> Mepụta iyi ọhụrụ, dịka windo ga-emeghe, site na nke usoro a ga-ewere ọnọdụ.
Site na ijuputa mpaghara achọrọ ma na ịpị bọtịnụ "Mepụta", ị nwetara faịlụ .torrent, nke nwere ike tinye na ntinye ọnụ ụzọ.
RSS nbudata ihe ntinye
A gaghị ahụpụta ntọala ọhụrụ nke usoro ọkacha mmasị gị na mmelite dị mkpa ndị ọzọ. Naanị ịkwesịrị ịdenye aha maka nkesa ụfọdụ ka ị nwee ike ibudata mmelite ngwa ngwa na nkesa na-eji na-eji RSS nri. Ị nwere ike ịmepụta ndepụta RSS site na ịhọrọ Njikwa> Tinye ndepụta RSS site na menu mmanya.
Akaụntụ njikọ nkwado
N'ihi atụmatụ a, ọ dịghị mkpa iji budata faịlụ ahụ .torrent n'onwe gị na kọmputa gị. Njikọ Magnet na-enye gị ohere ibudata faịlụ ọ bụla n'otu ụzọ ahụ dịka ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ ebudatara faịlụ .torrent. Site na ịhọrọ Njikwa> Tinye Torrent site na URL ahụ, ịnwere ike ịmalite nbudata site na mbidogharị njikọ njikọta. Ọ ga-apụta na-akpaghị aka na mpaghara nke usoro ihe omume ahụ:
Nhazi ngwa data ngwa ngwa
Na ọ bụ ezie na nbudata site na iyi na-egosi ọsọ ọsọ, ihe kacha mma dị iche maka onye ọ bụla. Ọ na-adọrọ mmasị karịsịa iji ngwa nchịkọta ngwa ngwa maka ndị na-ebudata fim, nchịkọta egwu egwu dị elu na faịlụ ndị ọzọ dị arọ. Na nke a, ọsọ nke uTorrent dị oke mma ma na-ahapụ ọtụtụ n'ime ndị asọmpi ya.
1. Kọmpat na usoro dị ala. MyTorrent na-ewe ihe dị ka 1 MB nke ohere diski ike ma na-agba ọsọ na ọbụna na ngwaọrụ ndị na-adịghị ike;
2. Intanet mara ihe;
3. Ọbịbịa nke asụsụ Russian;
4. Dị iche iche na nbudata faịlụ. Ị nwere ike ọ bụghị naanị ịtọ ụzọ maka ọsọ, mana ibudata faịlụ otu n'otu;
5. Cross-platform na support mobile OS;
6. Na nbudata faịlụ na oge;
7. Nkwado dọrọ & dobe teknụzụ maka izipụ ngwa ngwa.
1. Ọnụnọ nke mgbasa ozi na mbipute n'efu.
Hụkwa: Mmemme ndị ọzọ maka nbudata ihe nkiri na kọmputa gị
uTorrent bụ onye na-ahụ maka ìhè dị iche iche nke na-arụ ọrụ maka usoro dị iche iche. Ọ bụ n'ihi nkwụsi ike na nhazi nke nhọrọ bara uru na njedebe dị mma na Torrent aghọwo ihe a ma ama.
Download uTorrent maka n'efu
Otu esi eji usoro ihe omume maka nbudata ugbua uTorrent maka gam akporo Ebee ka arụnyere naTorrent Pimp m uTorrent
uTorrent bụ onye ahịa na-ewu ewu maka nbudata faịlụ ọ bụla na netwọk p2p na ọgbọ. N'ihi nkwụsi ike na ọrụ ya, usoro a bụ onye ndú n'etiti ndị ahịa ahịa.
Ụdị: Ndị ahịa ahịa Windows Torrent
Onye Mmepụta: BitTorrent, Inc.
https://termotools.com ig.termotools.com © Linux 2019